ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “တရုတ်ကိုလည်း တပည့်တော်တို့က ကြောက်ရတယ်ဘုရား” ဆိုတဲ့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး အထွေထွေသပိတ်ဆင်နွှဲနေသည့် ဒေသခံတောင်သူများ အချေအတင် ဆွေးနွေးပွဲ
“တရုတ်ကိုလည်း တပည့်တော်တို့က ကြောက်ရတယ်ဘုရား” ဆိုတဲ့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး အထွေထွေသပိတ်ဆင်နွှဲနေသည့် ဒေသခံတောင်သူများ အချေအတင် ဆွေးနွေးပွဲ
Why are you scarce of China(PRC)?
မအောင်မင်းရေ ကျေးတောသူလေးက တော့ သစ္စာတရားကို အားကိုးပြီး ရဲရဲရင့်ရင့် ပြောနေပြီ ရှင်တို့ဘဘကြီး သန်းရွှေကိုလည်းပြောလိုက်ပါဦး လက်တွေကို ယားနေမှာပဲနော်
တရုတ်ကိုကျေးဇူးဆပ်ဖို့ အတွက်ပြည်သူတွေကတော့ ချီးတွင်းတွေ ထဲက ချီးတွေပဲ ပေးနိုင်မယ်လို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုလာစုပ်လို့ 
Absolutely agree to MA Thwe Thwe Wins' talking!
CONGRATULATION FOR UNITED VILLAGES!
"IF WE ARE UNITED, WE CAN FIGHT ALL.
THEN SURE WE WIN!"
"DON'T BE AFRAID TO CHINA !"
Whatabrave and smart lady. We need more ladies like her. Where are the fucking 88 student leaders? Where are they hiding? All Burmese need to support this lady. We have no reason to afraid of fucking Chinese. Our people, our land, our forest, our culture, heritage have been destroyed.These costalot more than3trillion dollars. What the mother fucker Aung Min is talking about? We should get the gun and blow his head off.
ဦးလေးကြီးတ၈ုတ်ကိုများကျေးဇူး၈ှင်ကြီးတဲ့၈ူးနေပြီလားဒို့ မြန်မာပြည်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေ၇ဲ့လက်ထဲမှာပဲ၈ှိရမယ်ဦးအောင်မင်းကြီးယနေ့ မြန်မာပြည်ကအခင်းအကျင်းညေပာင်းသွားတာသိမသိပါသလော..သို့ မဟုတ်မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါသလော့ နောက်ပြီးဗီဒီယါုဖိုင်ထဲမှာခဏခဏညေပာနေတဲ့ဦးအောင်မင်း၇ဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ လာတာဟာသမတကြီးကိုပြန်ပြောပြရမှာတဲ့ဘာလို့ လာသေးတာလဲသင်ကိုယ်တိုင်တောင်သင့် ကိုသင်မပိုင်တာအခုလာတော့ လဲဘာထူးမှာလဲတ၈ုတ်တွေဂုတ်သွေးစုပ်နေတာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာနေပြီ...mandalayမြို့ကြီးလဲတ၈ုတ်မြို့ ဖြစ်နေပြီလေ..ဒါတောင်ဦးအောင်မင်းကတ၈ုတ်ကိုဖင်ခံချင်သေးရင်ဦးအောင်မင်းပဲခံလိုက်ပေါ့..၈ိုင်းသလိုဖြစ်နေရင်လဲဖင်ခံလိုက်လို့ လဲပြောလိုက်မယ်စောက်၈ှက်ကိုမ၈ှိဘူးခ၈ိုနီတကယ့် အကြီးစားငါ့ ဖို့ ငါ့တာငါဆိုတဲ့အတဖုံးလွှမ်းတဲ့ဦးလေးကြီးခေတ်ကပြောင်းသွားပြီ..တ၈ုတ်တွေလဲသတိတော့ ထားပေါ့..ကုလားပြီးရင်တော့ တ၈ုတ်အလှည့် ပေါ့...အလှည့် ကျရင်မနွဲ့နဲ့ပေါ့ တ၈ုတ်ကြီးရယ်မင်းယုတ်ထားသမျှမင်းပြန်အန်ထွက်ရမဲ့အချိန်ေ၇ာက်နေပြီကွ...
အစိုး၇ဘက်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၇ဲ့ လုပ်ကိုင်ပြောဆိုဆောင်၇ွက်ပုံတွေက တော်တော်အချိုးမကျဘူးဘဲ။ တော်တော်ဘဲ တောသူတောင်သားတွေကို လျှော့တွက်ထားပုံဘဲ။ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာလား ပုဆိန်၇ိုးတွေလားတောင် ဝေခွဲ၇ခက်တယ်ဗျာ. ဟူး.............။ ။
(1) Who has to thank to China?
Not public. Just Junta.
(2) Who has been getting benefits from China?
Not public. Just Ex-Junta.
(3) Who has to re-pay for the debt to China?
Not public. Just Than Shwe, Ex-Junta and their beloved Cronies.
(4) Who are scaring China?
Not public. Just this cowardly government.
(5) Who will save this country?
Just public. Not this Government nor Junta.
PLEASE GIVE COMMENT FOR THIS VIDEO!
WHAT THE HELL AUNG MIN TALKING!
"HE SHOULD NOT BE A OFFICER ANYMORE FROM ANY OTHER DEPARTMENTS IN MYANMAR. EVERY WATCHER CAN NOTICE THE WAY HIS TALKING IS VERY LOUSY (NO STANDARD),AND ONT ONLY CANNOT BE NAMED AS GENTLE MAN BUT ALSO NEGOTIATOR!"
VERY SHY LESS GUY 'AUNG MIN"
CANNOT BE WORTH AS THE WORD "MAN"!
No wonder the Myanmar Army generals are afraid of China and pressing, torturing, robbing and looting their own people of ethnic nationalities.
KKK is right to demand 88 student activists to do something. They can withstand poverty but they cannot withstand wealth. Now they have been fed by some NGO's and U Thein Sein. So they shut their mouths to Stand Up for the right of Myanmar Ordinary Citizens. They are too busy to attend to some matters created by government and racial chauvinists such as Arankan Buddhist-Muslim conflicts. maung Ko Ko Gyi is the most stupid fool who becomes puppet of those conspirators and master mind to divert attention to something else while all the corruption cases of Military officials and their cronies are exposing and people are demanding the jusrice.
If President U Thein sein has genuine desire for Myanmar and its people well-being, he should immediately sack U Aung Min. Myanmar always standup to fight invaders and aggressors in the past. There are many historical evidences.
Is it your responsibility to protect China?
The problem is start from you all.All the regulation is not transparent. Now , you tell the public , "if the project cancel , we have to pay three trillion. So funny , you all military group doing all bad things, we all have to suffer.
These type of bad culture , like your father or mother?
"ဘာ့ကြောင့် ဘယ်လို ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန် မှာ ဘယ် တရုတ် ကို ကြောက်ရသနည်း မောင်မင်း အောင်မင်း"
ငါကိုယ်တော်မြတ် ရှက်လှပါဘိကွယ်တို့ ။
Myanmar people should catch all the generals and their children who enjoy the benefit of these project and send to China as slaves to pay back the loan they took. Why should Myanmar ordinary people pay back the loan the military Government taken without approval of the people of Myanmar.
သာမန်ကျေးတောသူတစ်ယောက်ရဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ပြောပြတဲ့ ရင်ထဲက စကားလောက်ကိုတောင် ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်အောင် ပြန်ပြီး ရှင်းလင်း မပြောပြနိုင်တဲ့ သူက နေရာတကာ လိုက်ပြီး ညှိနှိုင်းဖို့ တာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတော့ အရည်အချင်းက နိမ့်ကျလွန်းတယ်ဆိုတာ သိပ် သိသာနေတော့တာပါပဲ။ ဘာမှ မပြောနိုင်တော့ ရဲဘော်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေဘာတွေ ဖွင့်ပြနဲ့ လူထုက သည်းခံလိုက်တာ အကောင်းမှတ်ပါ။ သမ္မတအကြံပေးဆိုသူတွေ ဥပဒေက လူကြီးဆိုတာတွေ အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုတာတွေက အခုတော့ သူတို့နာမည်ကလေး အေးအေးလူလူ မေးတာတောင် အပေါက်အလမ်း တည့်တည့် ဖြေဖို့ ထစ်အ ထစ်အ ဖြစ်နေတော့တာ။ ပြည်သူတွေကျတော့ နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး သွေး ပွက်ပွက် ဆူအောင် နှိပ်စက်ခဲ့ကြတာကလား။ စီမံကိန်းတွေကြောင့် ဘယ်သူတွေ ချမ်းသာသွားသလဲဆိုတာလည်း အရှင်းကြီးလေ။ ဦးအောင်မင်းကိုယ်တိုင် ဘယ်လောက်ချမ်းသာနေပြီလဲ သတ္တိရှိရင် ထုတ်ပြောကြည့်လိုက်ပါလား။ အလှပြင်တဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာလို ဆေးစားပြီးပုံနဲ့ ဆေးမစားမီပုံ ဆိုသလိုပေါ့၊ ဗိုလ်ချုပ်/၀န်ကြီး မဖြစ်မီ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်/၀န်ကြီး ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုပြီး ချပြရဲပါသလား။ သိပ် သတ္တိကောင်းပြီး သိပ် စွန့်စားပြီး ပြည်သူအတွက်ပဲ ကြည့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဦးအောင်မင်း ချင်ဗျား။
aung min you are no brain
ပညာမတတ်၊ အရှိကို အရှိအတိုင်း ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်း ကျေးတောသူပြောတာက အမှန်တရား.. သစ္စာတရား..
ဦးအောင်မင်းပြောနေတာက ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုးစိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံတဲ့ လူညံ့တွေရဲ့စကား.. ပရိယာယ်မာယာတွေ များလွန်းတဲ့ မုသာစကား.. အလိမ်အညာတရား..
နားထောင်နေသူတိုင်းက ခံစားသိနဲ့ အမှန်တရားကို အသေအချာ သိမြင်ကြတယ်။
မြန်မာတွေက ကျေးဇူးတရားကို အလေးထားမှန်းသိလို့
အောင်မင်းက ချက်ကောင်းကိုင်တဲ့အနေနဲ့ တရုပ်ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုပြီး သူ့ပထွေးသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းကလိန်ကကျစ်
တောသူတောင်သားတွေရဲ့ အသိတရားနဲ့ ပညာကိုအောင်မင်းလျော့တွက်ခဲ့တယ်၊၊
ပုဂံခေတ်က တရုတ်ပြေးမင်း အခု တရုတ်ကြောက်မင်း ဟေဒဟေဒဟေဒ
ပုဂ့ခေတ်တုန်းက တရုတ်ပြေးမင်း။ အခုဘောကာင်းဘီးချွတိတေခေတ်ကျပြန်တော့ တရုတ်ဘေကကင်နင်း ဟေးဟေး
ကျေးဇူးရှီရင် မင်းသမီးသွားပေးလိုက် ပြည်သူပိုင်တွေ မပါစေနဲံ
ရဲရဲတောက် ဒို့ဗမာတွေ သတ္တိခဲတွေ
သမ္မတကြီးကလည်း နိုင်ငံခြားအင်တာဗျူးတွေမှာ စစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်နဲ့ ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်သွားဖို့ ရှိပါသလားမေးရင် တရုတ်စိတ်ဆိုးမှာဆိုးလို့လားမသိ ပြာပြာသလဲကို ကာကွယ်ပြောဆိုနေသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
အိုဘားမား လာတဲ့ခရီးစဉ်ကိုတောင် တရုတ် စိတ်ခုမှာ စိုးလို့လားမသိ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလို့ မသုံးဘဲ အလုပ်သဘောခရီးလို့ သုံးသွားတာ တွေ့ရတယ်။ သံတမန်အသုံးတွေကိုတော့ နားမလည်လှပါဘူး။
ဦးအောင်မင်းကလည်း တရုတ်ကို ကြောက်ရတယ်လို့ ၀န်ခံသွားတယ်။ ဒီအတိုင်းဆို... ဒါဟာ မှန်သောသစ္စာစကားကို ပြောသွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။
၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း၏ ဤမှန်သော သစ္စာစကားကြောင့် လက်ပံတောင်းတောင်ကြီးနှင့်တကွ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး တရုတ်ဘေးရန်စွယ် အပေါင်းမှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရပါစေသား.............
သမ္မတကြီးနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်များ အမှန်တရားကို နားလည် သိရှိလက်ခံနိုင်ပါစေသား.............
ကျွန်တော်တို့ ကိုးစားယုံကြည်တဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်က "တရုတ်ကို ကြောက်ရတယ်"လို့ ၀န်ခံ ပြောသွားတဲ့စကားကို ကြားလိုက်ရတော့....
မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာ နှလုံးသားတွေကို အစိမ်းလတ်လတ် ဓားနဲ့မွှမ်းလိုက်သလို ခံစားရပါတယ် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း ခင်ဗျား.. စကားပြော လောကြီးသွားတာလားခင်ဗျာ.. ယူကျုံးမရ ၀မ်းနည်း ကျေကွဲရပါတယ်..။
အဲဒီစကားဟာ ကျွန်တော်တို့ မကြားချင်ဆုံး စကားပါ..။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ပါးသူရဲ့ ကျေးဇူုးကို အထူးသိတတ်တဲ့ လူမျိုးပါ။
ဒါပေမယ့် ၀န်ကြီးပြောသွားတာတွေကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ တာဝန်မဲ့မှု၊ ပရမ်းပတာနိုင်မှု၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ဘာသာ သာသနာအပေါ် ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားမှုတွေကို ၀မ်ပေါင်ကုမ္မဏီ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန် ပြောဆိုမှုတွေမှာ သိသာထင်ရှားစွာ တွေ့ရပါတယ်။ သာမန် အသိပညာ ရှိသူတွေတောင် ခွဲခြားသိမြင်ကြပါတယ်။
အခုလက်ရှိ တရုတ်ကျေးဇူးကြောင့် ဘယ်သူတွေ ကောင်းစားနေသလဲ၊ ဘယ်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေသလဲ တစ်တိုင်းပြည်လုံး သိကြပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ မတူရင် တစ်နိုင်ငံလုံးကိုတောင် ခပ်တုံးတုံးလူတွေ၊ ဥဏှောက်မရှိတဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေလို့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။
ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး နာကျည်းမှုကြောင့် ပွင့်အံလာတဲ့ စကားလုံးတွေကို အသိအမှတ် မပြုချင်ဘဲ နောက်ကွယ်က ပရောဂတွေကြောင့်လို့ ရိုးရာမပျက် စွပ်စွဲချင်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေအကြောင်းကို ပြည်သူတွေ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်နေကြပါပြီ။
Workers, farmers, religious monks and students should callageneral strike throughout the country. do not care about the military dogs whether they turn back or not. There is no place except grave yards for them to turn back. Time to strike and Strike the iron while it is hot. Do not waste for another two decades. The snake will change its skin regularly. Do not let the snake change its skin. Kill it. Kill it now. We will come back to our country when the country needs us to fight against the Chinese and the Chinese running dogs.
Than Shwe still betraying on the country people and destroying the country.
All are Than Shwe's responsiblities.
Not country people. He hasalot of property.
He can settle with his father China.
Dear Mr. President, please do not follow Ex. G. Than Shwe.
Please stop for his betraying plan on the country. Who did create 88 problem? How they solve the problem?
Please review, do not repeat the bad history. Should be shamealot!
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း မဆီမဆိုင် သူ့အကြောင်းပြောသွားတာလေး တစ်ချို့ကလွဲရင် ၊
ဦးအောင်မင်း ပြောသွားတာတွေက အမှန်တွေချည်းပါဘဲ ။
( နိုင်ငံရေး အရ အကျိုး ရှိ ၊ မရှိတော့ ၊ မသေချာလှ )
ပထမ အချက်ကတော့ ။
သူ ချပြောလို့ မရတာတွေ တော်တော်ရှိနေတာတောင် ၊အမှန်တွေကို သူ တော်တော် ပြောသွားခဲ့ / ပြောသွား ရဲ တာပဲ ။
အထူးသဖြင့် ၊ ” တပည့်တော်တို့ နိုင်ငံက စံနစ် မှားခဲ့တဲ့အတွက် ” ဆိုပြီး ထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ ၊
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ကို ချီးကျူးပါတယ် ။
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း တစ်နည်းပြောရရင် စစ်တပ် / အစိုးရ ရဲ့ ပွင့်လင်း မြင်သာလာမှု နှင့် ၊ အမှန်တရားကို လက်ခံ ပြီး ၊ လူထုရှေ့မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောရဲတဲ့ အပြုအမူကို ၊ ( အရင်က မှားခဲ့သည် ဆိုစေအုံး ) ချီးကျူး ကြိုဆိုမိပါတယ် ။
ဘာလို့ ဘလိုင်းကြီး အစိုးရကို လာဖားနေရလဲဆိုတော့ ၊ On Line ပေါ်မှာက စစ်တပ် ဆိုရင် ဆဲမယ် ဆိုတာချည်းပဲ ။
တစ်ယောက်က စဆဲ ရင်လည်း ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နှင့် လိုက်ဆဲနေတာ မဆုံးတော့ဘူး ။
ကျိုးကြောင်း ဆီလျှော်စွာ အမုန်းခံပြီး သုံးသပ်ပေးတဲ့ Comment တစ်ခု မတက်လာ မခြင်းပဲ ။
အဲလို အမုန်းခံပြီး သုံးသပ်ပေးတဲ့ Comment တက်လာရင်တော့လဲ တစ်ပြုံလုံး ရပ်သွားပြန်ရော ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ စစ်တပ် ရဲ့ အပြုအမူ မှန်တဲ့အခါများမှာ ၊ တမင်ကို မှန်ကြောင်း ၊ အမုန်းခံပြီး ချီးကျူးပေးမယ့်လူ လိုနေတယ်ထင်လို့ကို ၊ အမုန်းခံပြီး ချီးကျူးပေး လိုက်တာ
တရုတ်ကြီး ကျေးဇူး ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ကတော့ ၊
ကျေးဇူး ရှိတာ တပ်မတော် အပေါ်မှာလား ၊ ပြည်သူ အပေါ်မှာလား ဒွိဟ ဖြစ်စရာပါ ။
အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ ၊ သိပ် လက်မခံချင်ပါဘူး ။
တရုတ်ကြီး နှင့်လည်း ရန်မဖြစ်ရဲဘူး ။
အင်း ၊ အဲဒီ စကား ကမှ ချဲ့ စဉ်းစားစရာလို့ ထင်ပါတယ် ။Face Book ပေါ်မှာ လေ နှင့် မျိုးချစ်ပြတာကတော့ လွယ်တာပေါ့နော် ။
တကယ့်တကယ်ကျတော့ ၊ ခြေ လက် ပြတ်ပြီး အသေခံရတော့ ၊ စစ်သားတွေကိုး ။
excuse my incomplete Burmese fonts,i don't have full version to type.
according to shithead aung min their gov't is under chinese colony. We all the whole country have to make sure that we are not under chinese colony.
Burma was under british coloy for 100 years and also under japanese too. But they both came to Burma from very far distance places.They took what they want then left completely(by the way we had to attack them to get out). china is different is totally different they are from our next door andalot of illegal chinese are millions in our country already.
we all have to built up our patriotic spirits across the country. Actually , patrioticism started from young ages in the class room but we all failed to do for that.
we all have to careful about doing business with those chinese people.If you all go and buy from chinese shop or store , your money will go to them to make lots of profit and then they are using those money to get influence in everywhere. If we stop spending no or less money and our money should go to our own native people(all ethnic) even though they are more expensive than those chinese.
All chinese in Burma must know that their ancester came Burma with empty handed.Then they prosper later but they have no gratitude or greatful about our country. They just think they are working too hard to make proper life.
Before communist china was very very poor that's why they come to Burma. Now , some chinese (Burma born) people are saying they like to go back there because situation is totally opposite.
In Mandalay, if you want to getajob they ask you "can you speak fucking chinese?" that is totally unacceptable.
This is Burma , not china. We all must make sure that kind of influence must not have in the country.
This is something to think very seriously.We all must unite as "one".
Now china is building their power to make way bigger than ever. they have territorial disputes with Vietnam and Philipines. So, china threat is really really big.
puppet thein sein or aung min have no way to make final decision. The whole country must against this fucking stupid project and protest to stop completely.
we don't need to care thein sein or motherfucker aung min.If they scare china for fuck sake, give their stolen money back from than shwe and all of cronies.
We as Burmese public never had singe kyats from china.
Let's keep fighting and believing , we will conquor and free from military feudalism.
Aung Min told the truth that Myanmar Government had scared China since 1948.